Dhamma Video - Browse Media - Aaa
M - Munle (Monlae) Tawya - မုံလယ်တောရဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသံဝရ - Most Recent
Tags: ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စက်ဝိုင်းဒေသနာတော် (၁) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် မိုးကုတ်ဆရာတော် မိုးကုတ် mogoksayardaw mogok sayardaw sayartaw H - History - သမိုင်း (မှတ်တမ်းများ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / Mogok မိုးကုတ် ဝိပဿနာနည်းဖြင့် ကြိုးစားအားထုတ်၍ ထူးခြားသော ဖြစ်ရပ်များ ဆင်ဖြူကျွ...
Tags: 02 sin phyu kyun ဆင်ဖြူကျွန်းဆရာတော် ဦးဓမ္မသာရ ဆင်ဖြူကျွန်း sinphyukyun UDhammasarra U Dhammasarra Udhammatharya dhamma thar ya 1998 H - History - သမိုင်း (မှတ်တမ်းများ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အတုယူစရာ...
အတုယူစရာ ဦးဖရက်ချန်ထွန်း၏ တရားဖြင့်သေခြင်း
Tags: တရားဖြင့်သေခြင်း D - Dhamma - ဓမ္မ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အသက်...
အသက် (၁၄)နှစ်ရှိ အဋ္ဌမတန်းကျောင်းသူ မထက်ထက်အောင် တရားဖြင့်သေခြင်း
Tags: တရားဖြင့်သေခြင်း M - Munle (Monlae) Tawya - မုံလယ်တောရဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသံဝရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] သာဓုကီဠန...
ကျေးဇူးတော်ရှင် မုံလယ်တောရဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သာဓုကီဠန အန္တီမအဂ္ဂီဈာပနာ ပူဇာသဘင်မှတ်တမ်း
Tags: မုံလယ်တောရဆရာတော်ဘုရားကြီး M - Munle (Monlae) Tawya - မုံလယ်တောရဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသံဝရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ကျေးဇူးတေ...
Tags: ကျေးဇူးတော်ရှင် မုံလယ်တောရဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တသံဝရ၏ ခန္ဓာဝန်ချခြင်း(အဂ္ဂိဈာပန) monlae zarpana khandarwon cha chin M - Munle (Monlae) Tawya - မုံလယ်တောရဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသံဝရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဝိသာခ...
ဝိသာခ နှင့် ဓမ္မဒိန္နာ အမေး၊ အဖြေ တရားတော်
Tags: မုံလယ်ဆရာတော် , မုံလယ်တောရ , မုံလယ်, ဦးသံဝရ , ၀ိသာခ , monelal tawya sayartaw monelaltawya sayardaw monlae munle tawya , WitharKha and Dhammadainnar , Witharkha , Wi thar kha , Wisarkha , Wi sar kha , dhamma questions and answers M - Munle (Monlae) Tawya - မုံလယ်တောရဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသံဝရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မြို့စွဲ၊...
မုံလယ်တောရဆရာတော်ကြီး Tags: မုံလယ် ဆရာတော် - monelaltawya sayartaw monelaltawya sayardaw monlae munle tawya M - Munle (Monlae) Tawya - မုံလယ်တောရဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသံဝရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အထင်နှင့်...
မုံလယ်တောရဆရာတော်ကြီး Tags: မုံလယ် ဆရာတော် - monelaltawya sayartaw monelaltawya sayardaw monlae munle tawya Pages: 123 of 3